VONO OLONA TAO ANALALAVA : Novelesina tamin’ny hatony sy noratraina ny fivavian’ilay vehivavy
Vono olona niseho tamin’ny fomba feno habibiana no nitranga tao amin’ny Distrikan’ Analalava ny alin’ny alatsinainy lasa teo iny. 9 janvier 2020
Renim-pianakaviana iray 26 taona, mbola vao manan-janaka amam-bolana no nisy namono, teny amin’ny manodidina ny toerana filalaovam-baolina tao an-tanàna. Raha ny tatitra voaray dia mpivarotra anana no antom-piveloman’io vehivavy io, ny alatsinainy tontolo anefa dia tsy nisy nahita ny tany izay nandehanany ny fianakaviana.
Rehefa nokarohina ny alin’io andro io ihany, akory ny hatairan’ny rehetra raha nahitana ny vatany efa nalemy tsy nahahetsika sy tsy nahateny intsony nafenina tany anaty kirihitra. Marihina fa mbola nitempo ny fony tamin’io fotoana io ka noezahin’ny rehetra nentina haingana tany amin’ny Hopitaly saingy tsy tana intsony ny ainy afaka ora vitsy.
Rehefa natao ny fizahana ny razana dia nanambara ny mpitsabo fa voakapoka mafy tao amin’ny lohany sy ny hatony ity farany, nahitana ratra ihany koa tao amin’ny fivaviany. Marihina moa fa mbola tsy fantatra izay nahavanon-doza hatreto, efa eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ao an-toerana kosa ny fanokafana ny famotorana amin’izao fotoana izao.